အိမ်ထောင်ကျခြင်း (၃) ဒီလင် ဒီမယား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » အိမ်ထောင်ကျခြင်း (၃) ဒီလင် ဒီမယား
အိမ်ထောင်ကျခြင်း (၃) ဒီလင် ဒီမယား
Posted by ashinindaka on Dec 19, 2010 in Buddhism | 17 comments
ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးက ဘုရားရှင်ကို လျှောက်တယ်။
ဒီဘ၀မှာလဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့နဲ့
သက်ဆုံးတိုင် အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းလိုလှတယ်။
နံပါတ် (၁) သမသီလ ဖြစ်ဖို့ လို့ပြောပါတယ်။
နံပါတ် (၂) သမသဒ္ဓါ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
သဒ္ဓါ – ယုံကြည်မှု၊ သမ – တူညီတာ၊
ဆိုတော့ သမသဒ္ဓါဆိုတာ ယုံကြည်မှုတူညီတာကို ပြောတာ။
သမသဒ္ဓါ – လင်မယားအကြား ယုံကြည်မှု တူညီရပါမယ်။
ဒီလိုယုံကြည်ချက်တူညီမှသာ လင်မယား ပြုံပျော်ရွှင်စွာ
တစ်ယောက်က NLD ကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်
အမြဲတမ်းငြင်းခုံမှုတွေ တိုးပွါးပြီး လင်မယား ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။
အိုအောင်မင်အောင် ပေါင်းဆုံဘို့ မလွယ်ပါဘူး။
လင်မယားကြား ပျော်ရွှင်မှုတော့ အပြည့်အ၀ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
သမသဒ္ဓါ – ယုံကြည်မှုတူညီတာနဲ့ပတ်သက်လို့
ဘာသာရေးမှာ တူညီတဲ့ယုံကြည်မှုရှိမှသာ ဒီလင် ဒီမယား ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်
ချမ်းချမ်းမြေ့မြေ့ သက်ဆုံးတိုင် အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းဆုံနိုင်မှာပါ။
တစ်ယောက်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်
တစ်ယောက်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်တဲ့သူဘဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ တစ်ယောက်က မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီး
ဒီလိုမျိုး လင်မယားတွေ အပြည့်အ၀ ပျော်ရွင်ဘို့
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့သူက ဘုရားဆင်းတုတော်အိမ်မှာထား ကိုးကွယ်းချင်တယ်။
သောက်တော်ရေ၊ ပန်းစသည်ကပ် လှူဒါန်းချင်တယ်။
မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့သူက ဒါကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဗလီကို ပို့ရမှာလား။ ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့ ရှင်ပြုပေးရမှာလား။
ပြဿနာတွေ အများကြီး တက်လာနိုင်ပါတယ်။
နောင်ဘ၀မှာလဲ ပြန်လည်ဆုံဆည်းလိုတဲ့ ဒီလင် ဒီမယားအတွက်
ဒီ သမသဒ္ဓါလို့ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုတူညီရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာ
ဒါ့ကြောင့် ဘာသာရေးမှာ ယုံကြည်မှုမတူတဲ့သူကို
အိမ်ထောင်ပြုရင် နောင်ဘ၀ပြန်လည် မဆုံဆည်းနိုင်တော့ပါဘူး။
ဘုရားရှင်က ဒါကို မြင်လို့
နောင်ဘ၀မှာလဲ ဒီလင် ဒီမယားပြန်လည်ဆုံဆည်းချင်သေးသပဆိုရင်
သမသဒ္ဓါ – ယုံကြည်မှုတူညီကြပါ လို့ပြောတာပါ။
တခါတလေ Post အသစ်တင်ရတာ မလွယ်ပါလား။ ဒီဆိုက်ကြောင့်လား။ ဘာကြောင့်လဲ မသိ။
ပြဿနာတွေ အများကြီး တက်လာနိုင်ပါတယ်။)
အဲ့သည်အချက်ကတော့ တော်တော်ပြောရခက်နိုင်တယ် အရှင်ဘုရား
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်က အစ်ကိုကြီးအရွယ် တစ်ယောက်ကို မြင်ဘူးတယ်
သူက ခရစ်ယာန် အမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျတယ်ပေါ့နော်ဘုရား
သူကတော့ပြောပါတယ် သူနဲ့ သူ့ အမျိုးသမီးဟာ ယူလိုက်ကြပေမယ့် ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုဘဲဆက်ပြီးကိုးကွယ်ကြတယ်လေ
သူ့ အိမ်မှာတော့ ဘုရားစင်ရှိတယ်လို့ ပြောတယ် တစ်ခါတစ်လေတော့ သူ့ မိန်းမဟာ သူမအားတဲ့အခါ
ဘုရားဆွမ်းတင်တာတွေ ဘုန်းကြီးဆွမ်းလောင်းတာတွေတို့ ကို လုပ်ပေးတယ် တဲ့
သူဆိုလိုတာက ဘာသာရေးမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မစွတ်ဖက်တဲ့သဘောကို
သူ့ အသိတစ်ယောက်နဲ့ ပြောနေတာ တပည့်တော်ဒကာမိုက် အောင်ပုက ငယ်သေးတော့ နားထောင်ရုံဘဲနားထောင်းခဲ့ရဘူးတာ
ယ္ခု အရှင်ဘုရား အမိန့် ရှိမှ ပြန်ပြောင်းသတိရပြီး
အခုလောက်ဆိုရင် ခလေးတွေ ခလောက်တွေ ရနေကြပြီ ဆိုရင်ဖြင့် (အထင်ပါဘုရား) ဒီကလေးတွေရဲ့ 
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုများ ဖြေရှင်းကြမယ် သိဘူးဘုရား။
ကြားဘူး မြင်ဘူးတဲ့သူများ ရှိကြရင်လည်း ဘယ်သူ့ ကို မှ အငြင်းခုန်မဖြစ်စေတဲ့မှတ်ချက်လေးတွေပေးကြပါဦး။
ဒကာမိုက်အောင်ပု၊ ယုံကြည်မှုမတူသူ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးယုံကြည်မှု မတူသူတို့လက်ထပ်ကြတာ သက်ဆုံးးတိုင် အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းဆုံချင် ပေါင်းဆုံရမယ်။ ရာနှုန်းပြည့် စိတ်ချမ်းမြေ့ဘို့တော့ မလွယ်ဘူး။ဘာသာမတူသူနဲ့ လက်မထပ်ရဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လက်ထပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာနှုန်းပြည့်ပျော်ရွှင်မှု၊ သာယာမှုရဘို့ရာ ဘာသာရေးယုံကြည်မှု လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ သေတဲ့အထိပေါင်းသင်းသွားတဲ့ ဘာသာရေးယုံကြည်မှု မတူတဲ့တဲ့စုံတွဲတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာရေးယုံကြည်သူအချင်းချင်း အိမ်ထောင်ပြုတဲ့သူလောက်တော့ သာယာချမ်းမြေ့မှု ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ဟိုတစ်နေ့က ဘာသာယုံကြည်မှု မတူတဲ့ စုံတွဲ ဆွမ်းကပ်ပါတယ်။ ဆွမ်းကပ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူက မကပ်ပါဘူး။ ဘေးမှာ ဒီတိုင်း ငုတ်တုတ်ထိုင်နေပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်သူကတော့ စားပွဲတစ်ဖက်ထဲမှာ ထိုင်ပြီး ကပ်ရရှာပါတယ်။ ဒါ အပြစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကိစ္စလေးတွေမှာ ပျော်ရွှင်မှု ကြည်နူးမှု အပြည့်တော့ ရမယ်မထင်ဘူး။
ဘကြီးပု ပြောတဲ့ အဖေ အမေ ဘာသာ မတူတဲ့ သူ နှစ်ဦးက မွေးတဲ့ သမီး တယောက်နဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်ဘူးတယ်။ တနင်္ဂနွေဆို ဘုရားကျောင်းမှာ သီချင်း ဆိုရလို့ ပျော်နေတာနဲ့.. ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတာ ပျင်းရိငြီးငွေ့ စရာကောင်းပြီး ဘုန်းကြီး ဘာပြောပြော နောက်ဆုံး သာဓုနဲ့ အဆုံးသတ်နေရလို့.. အဖေက ခေါ်ရင်တောင် သိပ်မလိုက်ချင်လို့ ပုန်းနေတာလည်း ကြားမိဘူးတယ်။ အဖေကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့ဘဲလား အဖေဆိုတော့ သိပ်ပြီး ဘာသာရေး ကိုယ်တိုင် အလေးမထားတာကြောင့် သမီး လုပ်တဲ့ လူအပေါ် လွမ်းမိုးမှု မရှိတာလားတော့ မသိဘူး။ ဘုရားကျောင်းတက်ပြီး သီချင်းဆို ရတာနဲ့ ပျော်ရွင်ပြီး ချစ်သူတောင် ခရိယာန် ရှာထားတယ်။ ပြောလိုက်သေးတယ် ငါက ဗမာ ဘုန်းကြိးလည်း ကန်တော့ပါတယ်တဲ့။
လူငယ်တွေနဲ့သင့်လျှော်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်း သင်နည်း နည်းလမ်းတွေ ပြောင်းပေးဘို့ သင့်တယ်။ ဘုန်းကြီးများကလဲ အောက်ကလူ နားလည်မလည် မျက်စိကြီးမှိတ်ပြီး သူသိတာ စွပ်ဟောနေတော့ ခလေးတွေ ငြီးငွေ့တာပေါ့။ အင်း။ သက်ပျင်းသာချမိတော့တယ်။
မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်က ရှိလှ .. သန်း၅၀ပေါ့..။
အဲဒီထဲ ..မိန်းမ၊ယောက်ျားထပ်ခွဲရင် .. အကြမ်းအားဖြင့် မိန်းမ ၂၅သန်း၊ ယောက်ျား ၂၅သန်းပေါ့..။
အဲဒီထဲမှ အရွယ်မရောက်သူတွေဖယ်..။ အုပ်ထိမ်းသူအောက်က သူတွေဖယ်.. သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေဖယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်မရှိသူ . ရှိလှ.. ၆သန်းစီပေါ့..။
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ..သန်း၆၅၀၀ကျော်မှာ.. လူလွတ် ကျားမ တဖက်စီ သန်း ၈၀၀ကျော်စီ အသာလေး.. ရှိနိုင်တယ်..။
အခုစာအတိုင်းဆို… မြန်မာ လူပျိုလူလွတ်..အိမ်ထောင်မရှိသူတွေရွေးချယ်ခွင့်က ..တော်တော့်ကို ကျဉ်းမြောင်းသွားပါတယ်..။ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် …ကမ္ဘာရွာကြီးထဲ..အပုံ ၁၀၀ပုံ တပုံတောင် မရှိဘူးဖြစ်နေသလိုပါ..။
အင်း…. ဒီဂဏန်းတွေကနေ… လက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားပြီး အဖြေတခုရနိုင်လောက်ပါရဲ့..
ဘာသာမတူသူနဲ့ လက်မထပ်ရဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လက်ထပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာနှုန်းပြည့်ပျော်ရွှင်မှု၊ သာယာမှုရဘို့ရာ ဘာသာရေးယုံကြည်မှု လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ သေတဲ့အထိပေါင်းသင်းသွားတဲ့ ဘာသာရေးယုံကြည်မှု မတူတဲ့တဲ့စုံတွဲတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာရေးယုံကြည်သူအချင်းချင်း အိမ်ထောင်ပြုတဲ့သူလောက်တော့ သာယာချမ်းမြေ့မှု ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ ဟိုတစ်နေ့က ဘာသာယုံကြည်မှု မတူတဲ့ စုံတွဲ ဆွမ်းကပ်ပါတယ်။ ဆွမ်းကပ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူက မကပ်ပါဘူး။ ဘေးမှာ ဒီတိုင်း ငုတ်တုတ်ထိုင်နေပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်သူကတော့ စားပွဲတစ်ဖက်ထဲမှာ ထိုင်ပြီး ကပ်ရရှာပါတယ်။ ဒါ အပြစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကိစ္စလေးတွေမှာ ပျော်ရွှင်မှု ကြည်နူးမှု အပြည့်တော့ ရမယ်မထင်ဘူး။
ရွာအမှုကို ဘုန်းကြီးက ပတ်နေပြီ။
ဘုန်းဘုန်းရယ် လင်မယား အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းဖို့က ပြောတာတွေလည်းမှန်ပါတယ်။
သူ့ချည်းလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြားအချက်တွေ ရှိလို့ အခု တင်ပေးနေတယ်။ အရင်တင်တာ (၃) ခုတောင်ရှိသွားဘီ။
ဒီလင်ဒီမယားကိစ္စမှာ တပည့်တော်လဲ နဲနဲဝင်ပါလိုက်အုန်းမယ် ….
အခုဘ၀မှာ ဒီလင် ဒီမယားဆိုပြီး အိမ်ထောင်ပြုဖြစ်ပြီး ဆိုကထဲက သူတို့အတိတ်မှာ ဆုတောင်းရှိခဲ့ကြလို့ပါ … အတိတ်ဘ၀က သူတို့ပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ ကံအကျိုးပေးတွေမတူကြလို့ အခုဘ၀မှာ မတူတဲ့အခြေအနေတွေကြုံကြရတယ် … ဆင်းရဲ ချမ်းသာ … လူမျိုးကွဲ … ဘာသာကွဲ .. စသဖြင့် …..
ဒါပေမယ့် အတိတ်ဆုတောင်းကြောင့် ချစ်ခင်စုံမက်ပြီး လက်ထပ်ဖြစ်ကြတယ် …. ၀ါသနာ ဓလေ့ စရိုက်မတူညီကြတော့ ပြသနာတွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်ကြရတယ် … ဒါတွေက ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ် …
အခုဘ၀မှာ အဆင်ပြေကြလို့ နောင်ဘ၀အဆက်ဆက် အတူတကွနေမယ်ဆိုပြီးလဲ ဆုမတောင်းကောင်းဘူးလို့ထင်မိပါတယ် …
သံယောဇဉ်အမျှင်တွေကို မငြိတွယ်ပဲ ၀တ္တရားကိုသာ ဦးစားပေး ညှိနှိုင်းပြီး သံသရာကလွတ်မြောက်ကြောင်းကို အလေးပေးသင့်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ် …
ဗုဒ္ဓဘာသာက ကံကို ယုံကြည်တယ်ဆိုပေမဲ့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကံပဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါဆို တခြားဘာသာက ဘာဖြစ်ဖြစ် အလ္လာစီမံတာ ဆိုတာနဲ့ သွားတူနေမယ်။ အမည်သာ ကွဲတာမျိုးဖြစ်နေတယ်။ သတိထားကြအုံး။
ဒေါ်ဝေဝေကတော့ တကယ် တရားရှိနေတာပါလား။ ဝင်ပါ ပါဦး ( အုန်း )။
မှန်ပါတယ်ဗျာ။ သံယောဇဉ်ဖြတ်ရေး ဗုဒ္ဓတရားမှာ နောင်ဘဝ ဆက်တွဲရေးက ဘယ်လိုပါလာတယ်မသိ။
ဗုဒ္ဓဘာသာက သံယောဇဉ်ဖြတ်ရေးဟောထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ လောလောဆည်ဖြစ်နေတဲ့အခု လူ့ဘ၀ အဆင်ပြေဘို့ ဟောထားတာလဲ တပုံတပင်ကြီး။ နိုင်ငံရေးအဆင်ပြေဘို့၊ စီးပွါးရေးအဆင်ပြေဘို့၊ လူမှုရေးအဆင်ပြေဘို့၊ အခုရေးခဲ့သလို အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေဘို့။ လက်ရှိဘ၀မှာ မသေခင် အဆင်ပြေပြေ ဘယ်လို နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ လိုသေးတယ်မို့လား။
အခုတလော အလုပ်ကိစ္စ စိတ်ဖိစီးလွန်းလို့ တရားအကြောင်းတွေ တွေးနေမိလို့ပါ ….
သိပ်စိတ်ညစ်လာရင် တစ်ဖက်သတ်တွေလဲ တွေးမိတတ်လို့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပါဘုရား ….
ပြောစရာကလဲ ဒီရွာထဲပဲရှိတော့ ဒီထဲပဲ ၀င်ဝင်ပြောနေဖြစ်တော့တယ် …
ဒေါက်တာဘွဲ့ ရထားတယ်ဆိုတော့ … ရိုသေလေးစားမိပါတယ်..။
အမေရိက နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ပြောရရင် .. မြန်မာတွေဟာ ခေတ်စံနစ်ရိုက်ပုတ်မှုတွေကြောင့် ကွန်ဆာဗေးတစ်မှာ လက်ယာစွန်းတောင်ေ၇ာက်နေကြတယ်လို့ … စံနှုန်းတွေနဲ့ချိန်ဆမိပါတယ်..။
ယူအက်စ်ကိုတည်ထောင်သူ … ဖခင်များဟာ ..ဘာသာေ၇းအစွန်းရောက်ပြီး ရှေးရိုးစွဲလွန်းလာတဲ့ … အဲဒီခေတ်ဥရောပ-ရိုမန်ကက်တလစ်တွေဆီက ခွဲထွက်လာပြီးမှ တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီလိုပဲ.. လစ်ဘရယ်နဲ့ ..ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေကြား… ချိန်ဆကစာနိုင်ခဲ့လို့ ..ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံးတိုင်းပြည်ေ၇ာက်ပါတယ်..။
ဘာသာရေးအယူအဆ..အတွေးအခေါ်တွေဟာ .. နိုင်ငံရေးကိုလွမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ပါတယ်..။
ဆိုတော့… နိုင်ငံတိုးတက်ေ၇း..ကြီးပွားရေးဟာလည်း ..ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့.. မြင်မိပါတယ်..။
မြန်မာတွေကိုလည်း … လောကီရေးတွေမှာ အောင်မြင်သူတွေဖြစ်အောင် .. အမြင်တွေတည့်ပေးစေလိုတာပါပဲ..။
ကြည့်ရတာ… ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့..တရားရနေသူတွေ တယ်များလှပါတယ်ဘုရား…။
ဒါပေမဲ့… ယူအက်စ်မှာမွေးခဲ့တဲ့..။မွေးလာလတံ့သော မြန်မာဇာတိနွယ်များဟာ ..ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ ..အလွန်ပဲခက်ခဲသွားပါပြီ..။
လက်တွေ့ကျတဲ့..လောကအမြင်တွေကြားမှာ.. ထောက်စရာ..လက်မခံနိုင်စရာတွေများလွန်းလှတဲ့ .. မြန်မာထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကို လက်မခံတာကို တွေ့နေရတာ အရမ်းများလာလို့ပါ..။
ခန့်မှန်းချေ.. မြန်မာဇာတိနွယ် -အမေရိကန် ..၁၀၀ မှာ ၉၀လောက်က .. အရွယ်ရောက်ရင် ..ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန်ခွာနေကြတယ်လို့ ..တွေ့မိပါတယ်..။
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ .. သမိုင်းအထောက်အထား..ဖြစ်နိုင်ခြေတွေနဲ..ဘယ်ဟာကဖြစ်ဘုရားဟောမဟုတ်လောက်ဘူး..။
ဘယ်ဟာကတော့… အမှန်..ဆိုပြီးလည်း ..တည့်မတ်ပေးစေလိုပါတယ်..ဘုရား..။
အေး။ ကျေးဇူးပဲ။ ရေးလဲ ရေးနေဘီ။ ရေးပီးတာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ဒီဆိုက်က တင်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေချင်ဘူး။ ဒီနေ့ဆို ဒီကနေ တင်လို့ မရဖြစ်နေတယ်။
နောက်ထပ် တကြိမ် တပည့်တော် ဆူး ၀င်ပါအုန်းမည်။
ဘာသာ မတူသူတွေ တွေ့ပြီး လက်ထပ်ကြတာ ပျော်သည် ဖြစ်စေ မပျော်သည် ဖြစ်စေ သူတို့ ဆန္ဒသဘော နဲ့ လက်ထပ်ကြတာဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့သဘော သူဆောင်နေကြတာပါ။ လက်ထပ်တဲ့ ကျားမ နှစ်ဦးအတွက်တော့.. ဘယ်သူက အစွန်းပိုရောက်သလဲ အရင်ဘေးလူ အမြင်အနေနဲ့ သုံးသပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဘာသာမတူ ကျား မ နှစ်ယောက်မှာ.. အစွန်းရောက် ယုံကြည်သူ (သက်ဝင်ယုံကြည်သူ) ဆိုရင်တော့ နောက်တယောက်ကို ဆွယ်မှာဘဲ.. တခြား တဖက်ကလည်း သူကို မခွဲနိုင် ကိုယ်မစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ အဆုံး.. လိုက်သွားမလား.. ကိုယ်ဘဲ ရပ်နေမလား.. နောက်ထပ် စဉ်းစားစရာကတော့.. မျှမျှ တတ ကိုယ် ဆန္ဒ အတိုင်းနေကြမယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာကတော့.. ဘာသာခြားနဲ့ ပေါင်းသင်းလို့ ရတဲ့ ကလေးတယောက်က အဖေ အမေ သွန်သင် ဆုံးမ မှု အောက်မှာ.. ဘယ်လို ကြီးပျင်းမလဲ.. ဘာသာရေး အမြင် ဘယ်လောက် နီးစပ်နီးစပ်.. အတ္တ နဲ့ အနတ္တ ယုံကြည်မှု မှာ အများကြီး ကွဲလွဲသွားပြီ။ ဘာလုပ်လုပ် ဘုရားသခင် အလိုတော်.. လက်ခံလိုက်.. ကံ အကျိုးပေး ကြောင့် ဖြစ်တာ.. ဆိုတဲ့ အပြောတွေ ကြားမှာ.. အသိအတွေး နုသေးသူတွေ.. ဘာကို လက်ခံ ယုံကြည်မလဲ.. ၅နှစ်အရွယ်မှာ သင်ခဲတဲ့ စာရေးနည်းတွေ အခု အရွယ်အထိ မမေ့သေးပါဘူး။ လက်တွေ့အားဖြင့် နုစဉ် အခါမှာ သင်ကြားခဲ့တာဟာ ကြီးတဲ့ အထိ ခေါင်းထဲမှာ ဆွဲမြဲ နေတတ်ပါတယ်။ တသက်စာ လိမ်မာယဉ်ကျေးစေချင်ရင် တတ်နိုင်သလောက် ငယ်စဉ်မှာ နှလုံးသားထဲ ခေါင်းထဲ ရိုက်သွင်းရတာပါ။ တချို့သော လူများဆို.. မှားမှန်းသိတယ်.. ငယ်စဉ်ထဲက ရိုက်သွင်းထားတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် ဆက်မတွေးရဲဘူး။ ဆက်တွေးရင် ပြစ်မှား မိတော့လေမလား ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ လက်ခံ ယုံကြည် ကျင့်သုံးနေကြတာတွေ့ဘူးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမြင်အနေနဲ့ ပြောမယ် ဆိုရင် သံသရာ ဆိုတာ အရှည်ကြီးပါ ဒီအတွက် ဘယ်ဘ၀မှာ ဘယ်လို ဆုတောင်းကြောင့် စရိုက်မတူသူ လူနှစ်ဦးညားနေသလဲ တွေးချင် တွေးစရာ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့်.. လူနှစ်ဦး တချိန်က စိတ်တူ ကိုယ်တူ အချစ်တူ ဖြစ်ခဲ့လို့ ဘ၀များစွာ ခြားသွားပေမဲ့ သံသရာ တချိန်က တွေ့ခဲ့ပြီး ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ အရှိန် စိတ်ကလေးတွေ ရဲ့ တွန်းအားအရှိန်သက်ရောက်မှုက ယခု ဘ၀မှာ မမြင်ဘူးပေမဲ့ သိသလို.. မြင်မြင်ချင်းဘဲ ချစ်မိသလို ဖြစ်သွားပြန်ကော.. ဒါနဲ့ ညားကြလေသတည်းပေါ့.. ကွဲကွာသွားတဲ့ ဘ၀တွေမှာ တယောက် နတ်ပြည်ရောက်လို့ ဇိမ်ကျကျ နေခဲ့ရလို့ လူပြည်မှာ နုနု ထွဋ်ထွဋ် လူသားလေးဖြစ်ပြီး နောက်တယောက်ကတော့ ဘီလူးဘ၀ အကြိမ်ကြိမ် ရောက်ခဲ့ရလို့.. ရုပ်ကြမ်းစိတ်ကြမ်းကြီး ဖြစ်နေမယ်။ ဘေးလူ အနေနဲ့ မလိုက်ဖက်ပေမဲ့ သူတို့ စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်ပြီး ပျော်ရွှင်နေတာလည်း အတိတ်က ရေစက် ဆုတောင်းဘဲပေါ့.. ဘုရားသခင်က လူတွေ အလှ မာန မတက်အောင် ရုပ်ဆိုးကြီးနဲ့ ပေးညားတယ်လို့ ပြောကြလေ အုန်းမလား။